Janajati Awaj Online
धर्म निरपेक्षता, जातीय पहिचान, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आदिवासी जनजातिद्वारा देशभर आन्दोलन । जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाको अध्यक्षमा सन्तोषी । थरुहटको माग गर्दै कञ्चनपुरमा बृहत विरोध र्‍याली । प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिगामी र पश्चगामी कदम विरुद्ध उत्पिडन विरोधी संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा गठन । अधिकार प्राप्तिका लागि रोल्पाका दलितहरु बलिदान गर्न तयार । पाल्पामा लोकेन्द्र थापामगरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यिय आदिवासी कर्मचारी मञ्च गठन । धर्म निरपेक्षता, पहिचान सहितको संघीयता र पूर्ण समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आदिवासी जनजातिले सडक आन्दोलनको रुपमा मनाए विश्व आदिवासी दिवस । ‘धर्म निरपेक्ष राष्ट्र’ शब्द संविधानमा यथावत राखियोस: धर्म निरपेक्ष संरक्षण महासमिति । ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०७२’ बाट पुरस्कृत हुनेको नाम घोषणा, पुरस्कृत हुनेमा छापातर्फ सन्ध्या टाइम्स दैनिकका सुरेशकिरण मानन्धर र हिमाल खबरपरित्रकाका देविका घर्तीमगर, टेलिभिजन तर्फ एबीसी टिभीका लोकबहादुर गुरुङ/लाला र सगरमाथा टिभीका रोजिना लामा तथा रेडियोबाट ईलाम एफ.एफबाट सन्तोष नेम्वाङ र रेडियो जागरण रुपन्देहीबाट कमला चौधरी । के तपाई पत्रकार सम्मेलन गर्न, अन्तरकृया गर्न सस्तोमा हल खोजिरहनु भएको छ? या तपाईलाई तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्नका लागि हल भाडामा चाहिएको छ भने, हामीसग सम्पर्क राख्नुहोस । एकदिनको मात्र तीन हजार रुपैंया र दुईदिनको पाँच हजार रुपैंयामात्र शुल्क लाग्नेछ । साथमा मिडिया कभरेजका लागि सञ्चार खर्च, समाचार सम्पे्रषण र साथमा देशभरका सञ्चारमाध्यमा तपाईको खबर सम्पे्रषण हामी गरीदिने छौं । हाम्रो बेभसाईडमा तपाईको कार्यक्रमको समाचारलाई स्थान दिनेछौं । यदि तपाईलाई हाम्रा सेवाहरु चाहिएमा वा थप जानकारी चाहिएमा हाम्रो सम्पर्क नम्बर ९८४९७९१९८४, ९८४३७९८६५१ संचार संयोजक या हाम्रो ल्याण्डलाईन फोन नं. ०१४२५६५६९ मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो ठेगाना हो आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं । Mixed Mode | नेपाली | English गृह पृष्‍ठ
जलबायु परिवर्तन राजनीति
राजनीति	अधिकार प्राप्तिका लागि रोल्पाका दलितहरु बलिदान गर्न तयार साउन २५ रोल्पा । संयुक्त दलित अधिकारमञ्च रोल्पाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरु समाहित गरिदिनका भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । रोल्पा जिल्लामा रहेका सबै दलितहरुका साझा सस्था संयुक्त दलित जनअधिकारमञ्च रोल्पाको अगुवाईमा दलित अधिकारकर्मी, संघ सस्थाहरुको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । जिल्ला प्रशसान कार्यालय रोल्पामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ओसिम हत्याको सत्य तथ्य छानविन गर्न पिडित परिवारको माग काठमाडौं, १५ चैत । नवलपरासी रामनगर गाविस निवासी १९ वर्षिय ओसिम गुरुङको हत्या भएको भन्दै पिडित परिवारले सत्यतथ्य छानविन गरी हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् । गत पुस २५ गते नवलपरासी कावासोतीका २० वर्षिय मनोज गुरुङले दिदि मोनिकाको बर्थडे छ भनी बोलाएर घरबाट गएकी असिम घर फर्किइनन् । पोखरामा स्टाफ नर्स पढ्दै गरेकी ओसिमलाई मनोज र उनको परिवारले सुनियोजित तवरले हत्या गरेको भन्दै पिडित परिवारले घटनाको सत्य तथ्य छनविन गरी हत्यारालाई हदैस्म्मको कारबाहीको माग गरेका हुन् । मृतक असिमका परिवारले घटनाको सत्य तथ्य छानविन र नभएसम्म छोरीको शव नबुझ्ने बताएका छन् । ३० दलीय मोर्चाले बृहत जनसभा गर्नेकाठमाडौं । पहिचान पक्षधर ३० दलले फागुन १६ गते शनिवार (भोली) बृहत जनसभा गर्ने भएको छ । जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश÷क्षेत्र सुनिश्चित गर, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर, धर्म निरपेक्षता कायम गर लगायतका नारा सहित जनसभामा गर्न लागीएको हो । » आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा» सडक आन्दोलन गर्ने विपक्षीको निर्णय » पहिचान मेटेर राजनीति नगर्न पूर्व मन्त्री रामबहादुर थापाको आग्रह » माघ ३ को बन्द फिर्ता, प्रचण्ड, बैद्य र तुलाधरबीच मोर्चाबन्दी » जनकपुरमा झडप एक आन्दोलनकारीको मृत्यु
अन्य राजनीति ...
फिचर्स	आलमदेवि लर्सघा कोटाकोटमा लोपोन्मुख मगर पर्व यऊनाट जोगाउदै - विनोद रखाली मगरस्याङ्जा, फागुन । गण्डकी क्षेत्रमा परापूर्वकाल देखि प्रचलित पर्वको नाम हो “यऊनाट” । यो पर्व विशेष गरी स्याङ्जा जिल्लाको चण्डीभन्ज्याङ्, आलमदेवि, वीर्घा,श्रीकृष्णगण्डकी, निवुवाखर्क, जगत्रदेवी, पेलाकोट र पिडीखोला गाविसमा मनाउनेचलन थियो । तर अहिले आधुनिक सस्ंकृतिले विभिन्न गाँउ“मा विस्तारै लोपभैरहेको जानकारहरु वताउ“छन् । तथापी चण्डीभन्ज्याङ्को घुरडा“डा,आलमदेवीको लर्सघा वेसी, कोटाकोट वेसी, डा“डा“खर्क र विर्घाको वइघालाङ्घा लगाएत गुल्मीको एकसिह, पाल्पाको वौद्ध गुम्वामा श्री पन्चमीको दिन“यऊनाट” अर्थात “जीऊमामा” मनाउने गरिन्छ ।
पर्यटकलाई बोलाउदै जलजला, लगानी र प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा (फोटो फिचर सहित)- अमरजित पुनमगरभदौ, १० रोल्पा । धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले धनी भएपनि त्यसको प्रचारको अभावमा रोल्पाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल जलजला ओझेलमा पर्दै गएको छ । लगानी र प्रचारप्रसारको अभावका कारण भौगोलिक तथा प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर भएपनि यसलाई धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न भने सकिएको छैन । सदरमुकाम लिवाङबाट करिब २८ कोष टाढा रहेको जलजला समुन्द्र सतहबाट ३१७२ मिटर उचाइमा छ । घाासेमैदानी, दलदले क्षेत्रमा पानी जम्ने र जमिन हल्लिने भएकोले जलजला नयाा पाहुनाकालागि आर्कषणको केन्द्र बन्न सक्ने संभावना छ । लोक साहित्यमा नारी - रीता लामा दाङ, । सानै देखि घाटु नाचमा पारङ्गत बाघमारे १ ज्यामिरेकी लालमती सोमई अहिले ६० बर्ष पुगिन् । उनी अविवाहित हुदँ“ घा“टु नाचमा सहभागी हुन्थिन र त्यहा“ उनको भूमिका मुख्य हुन्थ्यो । तर अहिले विवाहित भैसके पछि उनले संस्कार अनुरुप घा“टु नाच्न नपाए पनि प्रशिक्षकको रुपमा सहभागी भने हुन्छिन । बैशाखे पूर्णिमा अर्थात चण्डी पूर्णिमा देखि सुरु हुने घा“टु ना“चमा कन्याहरुलाई प्रशिक्षण दिने, घा“टु नाचको तौरतरिका सिकाउने र घा“टु गीत गाउने गर्छिन । उनी भन्छिन ‘नाच सिक्दा ६–७ बर्षको थिए होला, अहिले ६० पुगे तर घा“टुबाट टाढा हुन सकेको छैन ।’ पञ्चकुले ५ खिलतपुरकी १० बर्षिया खड्की सोमाई यस पालाको बैशाखे पूर्णिमामा पहिलो पटक घा“टु नाचिन् । उनले घा“टुलाई नजिकबाट देखेको पनि यो पहिलो पटक हो । उनी भन्छिन–‘मलाई हाम्रो घा“टु ना“च यति राम्रो छ भन्ने लागेको थिएन ।’ उनी आफै घा“टु नाचमा सामेल भए पछि यो नाचलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयास समेत गरेकी छन । भन्छिन–‘मैले घाटु नाचसंगै गीत पनि सिक्ने प्रयास गरिरहेछु ।’ » रोल्पा कोटगाउँका एकल महिला आत्मनिर्भर बन्दै » नामको मात्रै ‘नमुना थारु ग्राम’» ढाका कपडा उद्योग सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर» जन्मभूमिको मायामा घलेलमा खानेपानी योजना » जीवनशैली फेरियो, अवस्था फेरिएन
अन्य फिचर्स ...
अन्तरवार्ता	लोक नाटक र नारी स्रष्टाको विषयमा लोक संस्कृत विद डा.गोविन्द आचार्यसंग गरिएको छोटो कुराकानी- रीता लामालोक साहित्य भनेको के हो ?लोक नाटक लोक साहित्यको एउटा हागा हो । लोक साहित्यमा विभिन्न विधा छन । जुन लोकले सिर्जना गरेका हुन्छन । लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाटक, कथा, उखान टुक्का (फुटकर साहित्य) आदि पनि लोक साहित्य हुन । जुन पुरानो सामाजिक किम्वदन्तीमा आधारित हुन्छन । जुन परापुर्व काल देखि हामीले सुन्दै आएका छौ । जो सत्य हुन पनि सक्छ । नहुन पनि सक्छ । यसै भन्न सकिन्न । लोक साहित्यमा महिलाको भुमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालको विभिन्न जातजातिहरुले विभिन्न चाड पर्वको समयमा गाउँने, नाच्ने लोक नाटकहरुमा सबैमा महिलाको भुमिका मुख्य र महत्वपुर्ण देखिन्छ । लोक नाटकमा उनीहरुको सहभागिता धेरै हुन्छ । लोक संस्कृत जोगाउने, सिर्जना गर्नर्ने काम नै महिलाले गरेका हुन । त्यसैले लोक साहित्यलाई नारी वेद पनि भनिन्छ । महिलाले गाउने, नाच्ने मात्रै नभइ पुरुषहरुले गाउने गीतमा पनि पुरुषहरु महिलाको पहिरनमा महिलाकै भुमिकामा नाचेका हुन्छन । सायद त्यस समयमा पुरुषहरुसँग नाच्ने महिला नभेटिएर हुन सक्छ । त्यो परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । राष्ट्रिय अदिवासी जनजाति महिला महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शान्ति जिरेलसंग गरिएको कुराकानी । - फोनिज सम्बाददातासभासद् हुँदै अध्यक्ष वन्नु भयो, कस्तो लागि रहेको छ ? मलाई त सभासद् भए जस्तै लागि रहेको छ । सभासद् हुँदा हिजो जुन खालका प्रतिकृयाहरु आउँथे । अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । सभासद र अध्यक्ष पदलाई मानिसले विलासिसँग दाँज्ने गरेको पनि मैले पाएँ । हिजो मलाई सभासद भएर पनि गडि चढ्नु हुन्छ ? भनि प्रश्न गर्थे । अन्य अन्तरवार्ता ...
आर्थिक	भूकम्प पीडितको लागि तमू छोंज धींद्वारा राहत सामाग्री वितरणगोरखा, २ जेठ । तमू ह्युल छोजं धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले भूकम्प पीडितको लागि संकलन गरेको राहत सामाग्री गोरखाका भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गरको छ । छोंज धींले संकलन गरेको पाँच लाख बराबरको राहत सामाग्री गोरखाका काशीगाउँ र फुजेल गाविसका भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गरीएको हो ।
आन्दोलन नेपाललाई यूकेबाट १० लाख आर्थिक सहयोगकाठमाडौं, १७ फागुन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालालई युके बाट १० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । जनजाति महासंघ जापान शाखाद्वारा जनजाति आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोगकाठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान शाखाले पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माणका लागि आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग गरको छ । आदिवासी जनजाति महासंघ जापान शाखाको पहलमा संकलन गरीएको ४ लाख ७० हजार रुपैंया आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाललाई सहयोग गरेको हो । जनजाति महासंघ जापान शाखाले पठाएको आर्थिक सहयोग रकम एक कार्यक्रमकाबीच आईतबार आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरलाई हस्तान्तरण गरीएको छ । » संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि टान ल्होछार ‘२०७१’ मनाइने » वाणिज्य बैंकद्वारा ३ खर्ब ऋण उठाउन छुटैछुट » मृगौला पिडित मिनालाई तामाङ समाज दक्षिणकोरियाको सहयोग» सुनको भाउ डेढ वर्षयताकै सस्तो» ईपीएस परीक्षाफल प्रकाशित
अन्य आर्थिक ...
मनोरन्जन	सामाजिक सेवामा समर्पित युवा पुनलाई सम्मान - अमरजित पुनमगर रोल्पा, २७ साउन । १४ औं अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा विद्यार्थी नेता दिपेश पुनलाई रोल्पामा सममान गरीएको छ । गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भुकम्पपछि उद्वारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा रोल्पाले पुनलाई सम्मान गरेको हो । गत बैशाखमा गएको महाभुकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरुको उद्वामा अहोरात्र खटेकाले उनी सम्मानित भएका हुन् । भुकम्पले क्षति पुर्‍याए लगतै बिभिन्न क्षेत्रमा पुगि पुनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । युवा नेताको रुपमा परिचित भएका पुनलाई रोल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले प्रमाण पत्रसहित सम्मान गरेका हुन् । बौद्ध अर्घौ बज्र गुरु जप साधना पूजा सम्पन्नपोखरा, ११ साउन । पोखरा १० रामघाटस्थित बौद्ध अर्घौ सदनको गुम्बामा आयोजित तिनदिने १० करोड बज्र गुरु जप साधना पूजा आइतवार सम्पन्न भएको छ । पूजा बौद्ध अर्घौ सदनका प्रमुख लामा आचार्य थुप्तेन ऐसे गुरुङको अगुवाईमा सम्पन्न भएको हो । आशा श्रेष्ठले जितिन मिस नेवा पोखराको ताजपोखरा, ८ चैत । नेवाः खल, कास्कीको आयोजनामा भएको यामाहा मिस नेवाः पोखरा नेपाल संवत ११३५ को उपाधी पोखरा खाल्टे मसिनाका आशा श्रेष्ठले जितेकी छिन । शनिबार पोखरामा सम्पन्न प्रतियोगितामा अन्य १६ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै श्रेष्ठले मिस नेवा पोखराको ताज पहिरिएकी हुन ।
» पाँचौ मिस नेवाः पोखरा ११३५ हुने» गायक ल्हाक्पातेन्जी लामाको पहिलो प्रस्तुति ‘शेर्पा यिन्सिङ्’ को विमोचन » लोपोन्मुख चर्या नाचको प्रशिक्षण सम्पन्न» मकर सक्राति उत्सब सम्पन्न» बान्तावामा फेरि असिम नै अन्य मनोरन्जन ...
मुख्य समाचार	‘अधिकार प्राप्त नभए विद्रोह गर्छौ’ बृहत संयुक्त मोर्चाकाठमाडौं, ४ भदौ । आदिवासी जनजातीको अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न समेत आफुहरु तयार रहेको आदिवासी जनजाती बृहत संयुक्त मोर्चा नेपालले जनाएको छ । अधिकार मागेर मात्र नहुने कुरा जनजातीले बुझिसकेकाले त्यसका लागि विद्रोह गर्न पनि आफुहरु तयार रहेको किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले बताए । ‘जनजातीको अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न पनि पछि हट्दैनौ ।’ उनले भने । प्रमुख दलको सहमतिमा ल्याइएको संविधानको खाकाले आदिवासी जनजातीलाई अधिकार विहिन बनाउँदैं लगेको तमू ह्यूल छोंझ धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले बताए ।
स्वायत्त मगरातको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनकाठमाडौं, ३ भदौ । पहिचान सहितको स्वायत्त मगरात प्रदेशको माग गर्दै मगर समदायले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । राज्यको पुनसंचरनामा स्वायत्त मगरातको माग गर्दै नेपाल मगर संघको आयोजनामा नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरीएको हो । मगर जातीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई प्रमुख चार दलको षड्यन्त्रकारी ६ प्रदेशको सहमतिले छिन्नभिन्न बनाएकोप्रति मगर समुदाय आक्रोशित बनेको छ । ‘यो देशलाई समृद्ध बनाउन आदिवासीको जिम्मा लगाउ’ आइबि गुरुङकाठमाडौं, २ भदौ । नयाँ संविधानको खाका कोरिदैं गर्दा आदिवासी जनजातिको हकअधकार कटौति हुँदै गइरहेकाले आदिवासी जनजातिहरु आक्रोसित बनेका छन् । हर्ष उल्लासकासाथ आउनुपर्ने संविधानको खाकामै पूर्वपश्चिम चारैतिर विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ । नेता तथा जनजाति अगुवा ईन्द्रबहादुर गुरुङले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको आदिवास िजनजातिका हकअधिकार नयाँ संविधानको खाकाबाट हटाउन थालेकोप्रति आक्रोश ब्यक्त गरे । नेता गुरुङले देश नै शासक वर्गले खाइसकेकाले अब यो देशलाई समृद्ध बनाउन आदिवासीको जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए ।
तामाङ मिडिया अवार्ड भक्तबहादुर स्याङ्तन र बुद्धप्रसाद गोलेलाइकाठमाडौं, १ भदौ । तामाङ मिडिया अवार्ड २०७२ बाट दुई जना सम्मानित भएका छन् । नमो बुद्ध एफएम काभ्रेका स्टेशन म्यानेजर भक्तबहादुर स्याङ्तन र भोजपुरबाट पहिचान दैनिकका बुद्धप्रसाद तामाङ अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन् । तामाङ संचार समूहले तामाङ समुदायबाट संचार क्षेत्रमा सक्रिय भइ कलम चलाउदैं आएका संचारकर्मीलाई वार्षिक रुपमा दुइजनालाई सम्मानपत्रबाट सम्मानित गर्दै आएको छ । जनजाती महासंघद्वारा देशब्यापी आन्दोलन र बन्दको कार्यक्रम घोषणाकाठमाडौं, २९ साउन । संविधानको मस्यौदामा आदिवासी जनजातीको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेकोप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले देशब्यापी आन्दोलन र बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा ल्याएको नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको ६ प्रदेशप्रति गम्भिर असहमति जनाउदैं धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीता लगायतका आदिवासी जनजातीका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेकाले महासंघ आन्दोलित भएको हो ।
» आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई संविधानमा समेट्न माग » सधैं उद्वारमा खटेका युवा दिपेश पुनलाई सम्मान » जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाको अध्यक्षमा सन्तोषी » थरुहटको माग गर्दै कञ्चनपुरमा बृहत विरोध र्‍याली » उत्पिडन विरोधी संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा गठन» पाल्पामा आदिवासी कर्मचारी मञ्च गठन» २१ औं विश्व आदिवासी दिवस सडकमा» साउन मसान्तभित्र संविधान आउछ: सभामुख नेम्बाङ» ‘धर्म निरपेक्ष राष्ट्र’ शब्द संविधानमा यथावत राखियोस: धर्म निरपेक्ष संरक्षण महासमिति » जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विश्व आदिवासी दिवस सडकमा मनाइने अन्य मुख्य समाचार ...
जलबायु परिवर्तन वयरवनका जनजाति समुदायलाई रेडप्लसवारे क्षमता अभिवृद्धि सम्पन्न - सौखिन वान्तावामोरङ, १७ असोज । मोरङको वयरवनमा एक दिने जलवायु परिवर्तन र रेडप्लस सम्वन्धमा आदिवासी जनजाति समुदायका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरीएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वयरवन गाउँ समन्वय परिषद् वयरवनको आयोजनामा कात्तिक पहिलो साता कार्यक्रम भएको हो । यार्चागुम्बुको संरक्षणमा तत्काल नलागे लोप हुने अवस्थामा काठमाडौं, २ भदौ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बु संरक्षणमा तत्काल कुनै कदम नचाले ५ वर्षमै लोप हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र जापानको क्युसु विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले यार्चागुम्बु उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
दाङमा चुरे क्षेत्र घोषणाको बिरोधमा गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम शुरु दाङ, १५ साउन । चुरे क्षेत्र घोषणाको बिरोध गर्दै आइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल दाङले गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम शुरु गरेको छ । चुरे क्षेत्र घोषणा र त्यसले पार्ने असरका बारेमा गाउँका उपभोक्ताहरुलाई जानकारी दिने तथा आन्दोलनबारे सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम थालिएको वन महासंघ दाङले जनाएको छ । » कुवा संरक्षणको लागी गुरु योजना वनाउन सुझाव» सामुदायिक वनमा लौठसल्ला खेती» डडेल्धुराको जंगलमा भीषण आगलागी » जलाधार नीतिबारे छलफल» डढेलोले सय हेक्टर बनक्षेत्र सखाप, फैलने क्रम जारी
अन्य जलबायु परिवर्तन ...
बिचार विश्लेषण	आदिवासी महिला र विकास - जुली गुरुङपछिल्लो समयमा विश्वभर महिलाको विषयमा बहस हुन थालेको छ । महिलामाथी हुने लैङ्गिक हिंसा, लैंङ्गिक विभेदमात्र नभएर महिला हकअधिकारका विषय नेपालमा पनि बहस र चर्चाको विषय बनेको छ । दैनिकजसो बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा पिडित हु“दैं आइरहेका छन् महिलाहरु । त्यसैले महिला हकअधिकारका विषयमा चौतर्फी रुपमा बहस र छलफल हुन थालेको हो । हाम्रो समाजमा महिलाका विषयमा जति बहस र छलफल भएका छन् तीमध्ये अत्यन्तै न्यून रुपमा मात्र आदिवासी महिलासंग सम्बन्धित छन् । आदिवासी महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, धार्मिक, भौगोलिक रुपमा कुनैपनि अवस्थाको खासै बिश्लेषण, बहस र चर्चा भएको पाइदैंन । तामाङ सञ्चार समुहको अवको वाटो - सुवास योञ्जनतामाङ पत्रकारहरुको साझा सस्था तामाङ सञ्चार समुहको महाधिवेशन यहि फागुन १८ गते राजधानीको वौद्धमा भव्य रुपमा सम्पन्न हुदैछ । अधिवेशनको अवसरमा देशभरीका तामाङ पत्रकारहरु राजधानीमा जम्मा हुदैछन् । नेपाल पत्रकार महासघको अधिवेशन देशभर धमाधम हुन लागीरहेको वेला तामाङ सञ्चार समुहको यो अधिवेशनलाई निकै महत्वपुर्ण रुपमा हेरीएको छ । मगर गाउँमा नोगोबाङ्गे (भूम्या) को रौनक- देविका घर्ती मगर÷दाङजुनु बुढा मगर नजिकिदै गरेको भुम्या पर्वको तयारीमा छिन् । यसवर्षको भुम्या पर्वका निमित्त उनले नयाँ मगर भेषभूषा समेत किनेकी छिन् । उनि रुकुम तकसेराबाट दाङ बसाईसराई सरेकी हुन् । रुकुमबाट दाङ बसाईसराई गरेर आएको लामो समय भएपनि हरेक भुम्या पर्व नजिकिदै गर्दा जुनुको ब्यवस्तता पनि बढ्ने गर्छ । ‘यसवर्ष नोकोबाङ्गे पर्व राम्रोसँग मनाउने भन्ने योजना छ–उनले भनिन्, सबै साथिहरु मिलेर यो वर्ष भुम्यालाई कसरी भव्य बनाउने भन्ने योजना छ ।’
» किन मर्छन् जनजाति पत्रपत्रिका ?» थारू गु¥वाको ज्ञान » पर्यटकीय गाउँ सिक्लेस अर्थात् चिली नाँसा» राज्यपुनसंरचनामा प्रतिगमनको खतरा » पहिचान सहितको संघीयता नै सबै नेपालीको जीत
अन्य बिचार विश्लेषण ...
खेलकुद मन्थली गल्फ मेडल कर्नेल मुले र मेजर लक्ष्मीलाईपोखरा, ११ साउन । हिमालय गल्फ कोर्स मझेरीपाटन, पोखरा–१८ मा आयोजना गरेको यस महिनाको मन्थली मेडल गल्फ प्रतियोगितामा नेट डिभिजनको उपाधी इन्डियन पेन्सन क्याम्पका प्रमुख कर्नेल मुलेले र ग्रसको उपाधी मेजर लक्ष्मी प्रसाद गुरुङले जितेका छन् । कर्नेल मुलेले सर्वाधिक ३३ अंक प्राप्त गरी विजेता बने ।
पूर्व फुटबलर थापाद्वारा बिद्यालयलाई खेलकुद सामग्री हस्तान्तरणकाठमाडौं । पूर्व फुटबलर सुन्दर थापाले बिद्यालयलाई खेलकुद सामाग्री सहयोग गरेका छन् । पूर्व फुटबलर थापाले रामेछाप जिल्ला दुरागाऊ गा.बि.स ८ स्थित श्री त्रिपुरेश्वर उच्च माध्यामिक बिद्यालयलाई बिभिन्न खेलकुद सामाग्री उपलब्ध गराएका हुन् ।
नेपालले विश्व च्याम्पियनसीप खेल्ने काठमाडौं, १५ माघ । नेपालले आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप खेल्न पाउने भएको छ । बुधबार सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसीसी बोर्ड बैठकले केन्या र नेपाललाई वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलाउने निणर््ँय गरेको हो । » सागर थापा विनै मनाङको टिम » व्याकुल माइला गोल्ड कप सुनकोसीलाई» नेपाल बन्यो डिभिजन थ्री को विजेता » पहिलो टी–ट्वान्टी नेपालले हङकङसंग खेल्ने» नेपाल एसियाड महिला क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा अन्य खेलकुद ...
वेब लिन्क्स » NEFIN Web Site
Anamnagar , Kathmandu , Nepal
Phone: 977 1 4256569 , Email: info@janajati.com